August 2018 – AsiaApps
Vk (VKontakte) က Facebook နဲ့ဘာတွေကွာဟသွားလဲ ?
August 31, 2018 WilliamFeaturesNo Comment on Vk (VKontakte) က Facebook နဲ့ဘာတွေကွာဟသွားလဲ ?
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်လောက်က Facebook က မြန်မာ့တပ်မတော်အဖွဲ့အစည်းအချို့ရဲ့ Account, Page တွေကို ဖြုတ်ချလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာ ကြောင့် မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်တဲ့ လူတချို့က Facebook အစား သူ့လို Social Media Platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ VK…
Region တိုင်းမှာ အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ Facebook ရဲ့ Watch Video service အသစ်
August 31, 2018 MoonApp NewsNo Comment on Region တိုင်းမှာ အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ Facebook ရဲ့ Watch Video service အသစ်
US မှာ မိတ်ဆက်ခဲ့တာ အချိန် တစ်နှစ်ကြာပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ Facebook က သူ့ရဲ့ Watch video platform ကို နိုင်ငံတကာသို့ ချပေးလိုက်ပါပြီ။ အဲ့တာကြောင့် အခုဆိုရင် facebook ရဲ့ Watch…
AR Lenses တွေဖန်တီးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို Apple မှဝယ်ယူ
August 30, 2018 August 30, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on AR Lenses တွေဖန်တီးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို Apple မှဝယ်ယူ
Apple ဟာတော့ Akonia Holographics အမည်ရှိတဲ့ Start-up ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို ဝယ်ယူလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ကကြေညာချက်အရသိရပါတယ်။ Akonia Holographics ဟာ ၂၀၁၂ ကမှ Holography scientists တွေစုပေါင်းပြီးစတင်တည်ထောင်ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါ။…
ကိုယ့်ဖုန်းကိုစိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်နိုင်မယ့် Zedge – Ringtones and Wallpapers
August 30, 2018 August 30, 2018 WaziynReviewsNo Comment on ကိုယ့်ဖုန်းကိုစိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်နိုင်မယ့် Zedge – Ringtones and Wallpapers
ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့လူအများစုဟာသူများထက်ပိုပြီးထူးခြားတာကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဥပမာ ကိုယ့်လက်ကိုင်အိတ် ဒါမှမဟုတ်အဝတ်အစားဖက်ရှင်နဲ့ဆံပင်ပုံစံကအစသူများထက်ထူးခြားတာကိုသဘောကျကြမှာပါ။ Asia Apps ပရိတ်သတ်ကြီးတွေကိုလည်းသူများထက်ထူးခြားပြီးဂေါ်အောင်စာရေးသူကနေတစ်ခုကူညီပေးနိုင်ပါတယ်?။ ကူညီမယ်ဆိုလို့ Spa လိုက်ပို့တာတို့ခေါင်းညှပ်ဆိုင်လမ်းညွှန်တာတို့ဇွတ်ကြီးတွေမတွေးလိုက်ပါနဲ့ဦးနော်?။ လေပေါ်ကနေပဲကူညီပေးမှာပါ။ Zedge Ringtones and Wallpapers ဆိုတဲ့ App လေးနဲ့ Asia App…
2018 ခုနှစ်အတွင်း ipad mini ကို ထုတ်လုပ်နိုင်ဖွယ် မရှိတော့တဲ့ Apple
August 29, 2018 MoonSmartphone NewsNo Comment on 2018 ခုနှစ်အတွင်း ipad mini ကို ထုတ်လုပ်နိုင်ဖွယ် မရှိတော့တဲ့ Apple
သတင်းဌာနဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Bloomberg ရဲ့အဆိုအရ Apple ကသူ့ရဲ့ Ipad Mini အသစ်ကို ဒီနှစ်မှာထွက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူးလို့ သိရပါတယ်။ Apple ရဲ့ ipad mini series နောက်ဆုံးထွက်ခဲ့တာကတော့ ၂၀၁၅ မှာထွက်ရှိခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၅ မှာ…
အာကာသအကြောင်းစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက် NASA ရဲ့ App
August 29, 2018 WaziynReviewsNo Comment on အာကာသအကြောင်းစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက် NASA ရဲ့ App
ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးကတကယ်တမ်း သိပ္ပံနည်းကျပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်အတော်လေးဆန်းကြယ်ပါတယ်။ ဘယ်ကဘယ်လိုကမ္ဘာကြီးစဖြစ်လာသလဲဆိုတဲ့တိတိကျကျအဖြေမရှိသလိုအခုထိလည်းငြင်းခုန်နေကြတုန်းပါ။ ကမ္ဘာ့အပြင်ဖက်အာကာသထဲမှာလည်းမရေမတွက်နိုင်လောက်တဲ့ဂြိုလ်နဲ့စကြဝဠာတွေများစွာထပ်ရှိနေပြီးပိုပြီးတော့တောင်မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီလို စိတ်ဝင်စားစရာတွေကိုပိုပြီးလူသားတွေနားလည်းသိရှိအောင်လေ့လာစူးစမ်းနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့တွေထဲကမှအမေရိကန်အခြေစိုက် NASA အဖွဲ့ကြီးကတော့မသိသူရှားလောက်အောင်လူသားတွေအတွက်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ အရင်တုန်းကဆိုရင် NASA ရဲ့အာကာသဓာတ်ပုံတွေကြည့်ချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ်သတင်းတွေသိချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ်အင်တာနက်ပေါ်မွှေနှောက်ရှာဖွေရပါတယ်။ အဲ့ဒီအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက် NASA ကိုယ်တိုင် ”NASA” ဆိုတဲ့ Application လေးကိုထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပါပြီ။ ဒီ…
August 28, 2018 MoonSmartphone NewsNo Comment on Mobile ဖုန်း ကုမ္ပဏီ အများစု စိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ in-display Fingerprint scanner feature
ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့မျက်နှာပြင်အောက်မှာ လက်ဗွေဖတ်တဲ့စနစ်ထည့်သွင်းထားတဲ့ in-display fingerprint scanner feature ကို Vivo ဖုန်း ကုမ္ပဏီ ကနေစတင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Vivo က စတင်ပြီး မကြာခင်မှာတော့ Xiaomi, Oppo, Meizu, Samsung နဲ့…